३.६% नर्सको मत प्राप्त व्यक्ति नर्सिङ संघको अध्यक्ष, नर्स ९० हजार तर जम्मा ३२ सय मतले नेतृत्व चयन – Health Post Nepal
२०७६ पुष १० गते १७:२२
नेपाल नर्सिङ संघमा सदाझैँ सत्तारूढ नेकपानिकट प्रगतिशील समूहको पूरै प्यानलले जित हात पारेको छ । संघमा स्थापनाकालदेखि नै एकछत्र वर्चश्व कायम गर्दै आएको प्रगतिशील समूह यसपटक पनि ठूलो मतान्तरले प्यानलसहित नयाँ कार्यसमितिका लागि चयन भएको हो । संघको बुधबार सम्पन्न निर्वाचनमा करिब एकतिहाइ मात्र मत खसेको पाइएको छ । देशभरका २१ मतदान केन्द्रमार्फत भएको मतदानमा करिब साढे पाँच हजार नर्सले मात्र मतदान गरेका हुन् । यो संख्या कुल नर्सको करिब ६% र संघका कुल मतदाताको करिब एकतिहाइ मात्र हो । देशभर कार्यरत नर्सहरूको छाता संगठन नेपाल नर्सिङ संघको नेतृत्व चयनमा जम्मा ६% मात्र नर्स सहभागी हुनुले छाता संघप्रति नर्सको आकर्षण नभएको पुष्टि गरेको छ ।
एकतिहाइ मतदाता मात्र मतदानमा सहभागी
संघको बुधबारको मतदानमा करिब एकतिहाइ मतदाताले मात्र मतदान गरेको पाइएको छ । यसै पनि कुल नर्सको १६% मात्र छाता संघमा आबद्ध छन् । यो निर्वाचनमा संघका कुल मतदाता १५ हजार १ सय ५९ थिए । त्यसमा पनि यसपटक अन्तिम समयमा आएर उल्लेख्य मात्रामा मतदाता बढेका थिए । तर, बुधबार सम्पन्न निर्वाचनमा करिब साढे ५ हजारले मात्र मतदान गरेका छन् । यसबाट संघमा आबद्ध नर्सहरूको पनि संघप्रति खासै आकर्षण नभएको पुष्टि हुन्छ ।
अध्यक्षका दुई प्रत्याशीबीच मात्र भएको प्रतिस्पर्धामा विजयी मनकुमारी राईले ३ हजार २ सय ७६ मत प्राप्त गरेकी छिन् भने उनकी प्रतिद्वन्द्वी प्रा. मुना राना थापाले २ हजार ८५ मत प्राप्त गरेकी छिन् । यसरी हेर्दा ९० हजार नर्सको नेतृत्व गर्ने छाता संघको नेतृत्व चयनमा जम्मा साढे ५ हजार नर्स सहभागी भएका छन् भने ३२ सय ७६ नर्सको विश्वास प्राप्त व्यक्ति नेतृत्वमा स्थापित भएको छ ।
८९ हजार ७ सय ८७ नर्स काउन्सिलमा दर्ता तर छाता संघका मतदाता जम्मा १५ हजार १ सय ५९
नेपाल नर्सिङ संघमा हालसम्म ८९ हजार ७ सय ८७ नर्स दर्ता भएका छन्, अर्थात् उनीहरूले संघको लाइसेन्सिङ परीक्षा पास गरी नर्सिङ अभ्यासको अनुमति पाएका छन् । नेपाल नर्सिङ संघ यी सबै नर्सको पेसागत सुरक्षा र हकहितका लागि स्थापित छाता संगठन हो । तर, आफ्नो छाता संगठनमा नर्सको आकर्षण भने ज्यादै न्यून देखिएको छ । जम्मा १६.८% नर्स मात्र छाता संघमा आबद्ध छन् ।
संघको यसपटकको निर्वाचन प्रयोजनका लागि तयार पारिएको मतदाता नामावलीमा जम्मा १५ हजार १ सय ५९ नर्सको नाम सूचीकृत थियो । यसको अर्थ नर्सको ठूलो हिस्सा छाता संघमा आबद्ध छैन । संघलाई राजनीति गर्ने थलोका रूपमा नभएर उद्देश्यअनुरूप साँच्चिकै नर्सको पेसागत हितका लागि सबल बनाउने हो भने सबै नर्सलाई संघप्रति आकर्षित गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि पहिले त छाता संघप्रति नर्सको आकर्षण नहुनुका कारणहरूको खोजी गर्नु अनिवार्य छ ।
बेरोजगारी, अति न्यून पारिश्रमिक र श्रमशोषण झेलिरहेका नर्सको किन छैन छाता संघमा आकर्षण ?
पेसागत समस्याको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा बढी बेरोजगारी तथा श्रमशोषणको सिकार बनिरहेका पेसाकर्मीका रूपमा नर्सलाई लिइन्छ । करिब ४० हजार नर्स बेरोजगार छन् भने जागिर पाएका पनि न्यून पारिश्रमिकलगायत समस्याबाट पीडित छन् । भोलेन्टियरका नाममा शोषण खेपिरहेका नर्सको कहानी उत्तिकै पीडादायक छन् । यस्तोमा आफ्नो पेसागत सुरक्षा र हकहितको संरक्षणका लागि लड्ने छाता संघप्रति नर्सको आकर्षण किन छैन त ? यसको एउटै कारण हुन सक्छ, संघले आफ्ना सदस्यको हकहित र पेसागत सुरक्षार्थ प्रभावकारी भूमिका निभाउन सकेको छैन, आफ्ना सदस्यलाई सुरक्षाको अनुभूति दिन सकेको छैन । संघको नयाँ नेतृत्वले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ । संघलाई राजनीतिक गुटबन्दीका आधारमा नभई समग्र नर्सको पेसागत सुरक्षार्थ चलाउनु आवश्यक छ । बढीभन्दा बढी नर्सको आबद्धता भएमा मात्र नर्सिङ संघले आफ्नो स्थापनाको सार्थकता स्थापित गर्न सक्नेछ ।
प्रगतिशील प्यानलकी अध्यक्ष मनकुमारी राई ३ हजार २ सय ७६ ल्याएर विजयी भएकी छिन् । उनकी प्रतिस्पर्धी संयुक्त पेसागत प्यानलकी प्रा. मुना राना थापाले २ हजार ८५ मत प्राप्त गरिन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश सुब्बाले ३ हजार २ सय ७० मत ल्याएका छन् भने उर्मिला श्रेष्ठले १ हजार ९ सय २० मत पाएकी थिइन् । त्यसैगरी, महासचिव नर्वदा थापा २ हजार ९ सय २४ मतका साथ विजयी भइन् भने यशोदा बरालले २ हजार १ सय ७६ मत प्राप्त गरिन् ।
त्यसैगरी, उपाध्यक्षमा मीना बानियाँ, सचिवमा प्रमिला थकाली, कोषाध्यक्षमा कल्पना श्रेष्ठ, खुला सदस्यमा विजया अधिकारी, जनजाति सदस्यमा हरिप्रसाद कोजू विजयी भए । सदस्यमा सोनु शेर्पा, सपना विक, अञ्जुकुमारी महतो, कोहिनुर फारुकी, अम्बिका पौडेल र सीता केसी विजयी भएका छन् । हरेक ३ वर्षमा हुनुपर्ने संघको निर्वाचन २ वर्ष ढिलो गरी ५ वर्षपछि भएको हो ।
नेपाल नर्सिङ संघ